भारत तथा खाडीबाट रोल्पा भित्रिने मुख्य निगरानीमा
महेश न्यौपाने बिहीबार, चैत १३, २०७६, १४:२७
रोल्पा- कोरोना भाइरसको महामारीको त्रास बढ्दै गएपछि रोजगारीका लागि भारत तथा खाडी मुलुक गएकाहरु फर्किने क्रम पनि बढेको छ। यससँगै रोल्पामा कोरोना विरुद्धका गतिविधि पनि सुरु हुनथालेको छ। पूर्व तयारीका कामलाई तीव्र पारिएको छ।
नेपाली सेनाको सहयोगमा रोल्पा अस्पताल परिसरमा आइसोलेसन कक्ष तयार गरिएको छ। अस्पतालका ४ कोठा र नेपाली सेनाको सहयोगमा निर्माण भएको टेन्टलाई आइसोलेसन कक्षको रुपमा तयार गरिएको हो।
रोल्पा नगरपालिकाले नगरका सबै वडामा सूचना संकलन गरेको बताएको छ। ‘नगरका १० वटै वडामा जिल्ला बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरुको लगत संकलन गर्ने व्यवस्था गरेका छौ’, नगर प्रमुख पूर्ण केसीले भने’ ‘बाहिरवाट आउने व्यक्तिहरुलाई जिल्ला सदरमुकाम लिवाङमा स्वास्थ्य जाँचको समेत व्यवस्था गरेका छौ।‘
दाङबाट रोल्पा भित्रिने नाकाको रुपमा रहेको होलेरीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले १५ कोठाको आइसोसेलन कक्ष तयार गरेको जनाएको छ। प्यूठानबाट रोल्पा भित्रिने सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको खुंग्रीमा समेत आइसोलेसन कक्ष तयार गरिएको बताइएको छ।
जिल्लाका सबै गाउँपालिकाले हेल्थ डेस्क स्थापना गरेका छन्।
गाउँपालिका भित्र रहेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघ संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा कोरोना विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले जनाएको छ। ‘साहस नेपाल, स्ट्रोम फाउन्डेसन र गाउँपालिका मिलेर पर्चा पम्प्लेट वितरण, बजार क्षेत्रहरुमा माइकिङ गर्ने काम गरिरहेका छौं’, वडाध्यक्ष गंज क्षेत्रीले भने।
जिल्लाको लुंग्री गाउँपालिकाले गाउँपालिका प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको रुइनिवाङ, दोमई, मैनामारे, जुतुङखोला लगायतका स्थानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको छ।
गाउँपालिका प्रवेश गर्दा अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेका छौ’, गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गा खड्काले भने।
थवाङ गाउँपालिकाले कोरोना आपतकालिन कोष स्थापना गरेको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष रामकिरणी रोकाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अन्य ४ जना सदस्य रहेका छन्। ग्लोबल आइएमई बैंकमा खाता रहने गरी सञ्चालन गरिएको आपतकालिन कोषबाट कोरोना संक्रमितहरुको उपचारमा खर्च गरिने गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक तुलबहादुर पुनले जानकारी दिए। कोषमा गाउँपालिकाले ५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको छ।
यसैगरि गाउँपालिका अध्यक्ष वीरवहादुर घर्ती, उपाध्यक्ष रामकिरणी रोका, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेवतवहादुर वुढाथोकीले ५/५ हजार जम्मा गरेका छन्। कोषमा थवाङ गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले १ महिनाको पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने भएका छन्।
‘कोषमा अन्य जनप्रतिनिधि, स्थानीय व्यापारी र सर्वसाधारणले समेत रकम जम्मा गर्ने अपेक्षा गरेका छौं’, स्वास्थ्य संयोजक पुनले भने।
सुनछहरी गाउँपालिकाले समेत पोवाङमा हात धुने व्यवस्था गरेको छ। गाउँपालिका बाहिरबाट आउनेहरुलाई १४ दिन होम क्वारेनटाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष आशबहादुर पुनले बताए।
‘गाउँपालिका छिर्नेहरुलाई स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरेका छौ’, अध्यक्ष पुनले भने।
गाउँपालिकाका सबै वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा कम्तिमा २/२ वटा वेडको व्यवस्था रहने गरी आइसोलेसन कक्ष तयार गरेको अध्यक्ष पुनले बताए।
गाउँपालिका नजिक रहेको पोवाङ स्वास्थ्य चौकीमा भने ५ वेडको आइसोलेसन कक्ष तयार गरिएको छ।
जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारहरुले कोरोना विरुद्ध सचेतना, क्वारेनटाइन र आइसोलेसन कक्ष सञ्चालन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले जानकारी दिए। ‘सबै स्थानीय सरकारहरुले यस विषयलाई गम्भिरताका साथ लिएका छन्’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले भने।
स्वास्थ्यकर्मीलाई मेडिकल सामाग्री छैन
कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएका बिरामी जाँच गराउदा लगाउने मेडिकल सामाग्री नभएको रोल्पाका स्वास्थ्यकर्मीहरुले गुनासो गरेका छन्। ‘संक्रमण परीक्षण गर्दा चाहिने आधारभूत मेडिकल सामाग्री गाउन, बुट, मास्क र ग्लोव्स् उपलब्ध छैन’, उनीहरुले भने।
संक्रमण विरुद्ध लड्ने पहिलो पंक्तिको योद्धा भनेकै स्वास्थ्यकर्मी भए पनि उनीहरुका लागि चाहिने आधारभूत मेडिकल सामाग्री अहिलेसम्म उपलब्ध हुन नसकेको रोल्पा अस्पतालका डा अनिल केसी बताउँछन्।
‘आइसोलेसन कक्षभन्दा पहिला स्वास्थ्यकर्मीका लागि मेडिकल सामाग्रीको जरुरी छ’, डा केसीले भने।
होम क्वारेनटाइन नै उपयुक्त र सजिलो विधि भएको डा केसीको भनाई छ।
यसअघि रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिले अबिलम्ब आइसोलेसन कक्ष तयार गर्ने बताएका थिए। सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय बमोजिम जिल्लालाई अनिश्चितकालीन लक डाउन गरिएको छ।
मजदुरलाई ट्रकमा खाँदेर घर फर्काइएकोमा असन्तुष्टि : हेलो सरकार! रोल्पाली भेडाबाख्रा हुुन्?
रोल्पा नगरपालिकाले हस्तान्तरण गर्‍यो मेडिकल सामाग्री